Karaman Konya Hızlı Tren Hattı Ne Zaman Açılacak? – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia42 KonyaGoorma ayaa Karaman Konya Xawaaraha Xawaaraha Sare furi doonaa?
30 / 11 / 2019 42 Konya, 70 Karaman, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
karaman konya khadka tareenka xawaaraha sare
Goorma ayaa la furayaa Khadka Xawaaraha Sare ee Karaman? Xisbiga Dadka Republican Karaman kuxigeenka Av. İsmail Atakan Ünver wuxuu ka qeybgalay wadaxaajoodkii miisaaniyadda ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ee Sharciga Maaliyadda Dowladda Dhexe ee Sannadka 2020, kaas oo looga dooday Qorshaha Baarlamaanka iyo Guddiga Miisaaniyadda. Wuxuu weydiiyay Wasiirka Turhan arrimaha ku saabsan mashaariicda qorshaysan iyo kuwa socda ee Karaman.
Kalfadhiga lagu dooday miisaaniyadda Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha; hore u weydiiyay masiirka tareenka xawaaraha sare ku keenay ajandaha Golaha Guud ee Baarlamaanka iyo su'aalo qoran. Khudbadiisii; “Mr. Plan iyo Madaxweynaha Guddiga Miisaaniyadda, saaxiibkayaga Lütfi Elvan waxaa lagu dhammeystiri doonaa waqti aad u yar inta lagu gudajiro Wasaaradda Gaadiidka muddada 2014 Konya-Karaman howlaha dhismaha tareenka xawaare sare aan la dhameystirin, laakiin sanad walba 'Sannadkan waa la soo gabagabeyn doonaa.' ayaa balan qaaday. "
Xusuusinta in bayaan laga soo saaray khadka Tareenka Sare ee Konya-Karaman, in Duqa Magaalada Karaman uu dhammaaday Janaayo 2016. Sonra Kadib, Maareeyaha Guud ee TCDD ee 2016 bishii Agoosto İsa Apaydın Raiisel wasaare Binali Yildirim ee 2017 wuxuu yiri, 'Wuxuu furi doonaa sanadka soo socda.' Bishii Maarso, Wasiirka Gaadiidka 2018 Ahmet Arslan ayaa yiri, 'Wuxuu furi doonaa dhammaadka sannadkan.' Madaxweyne Erdogan bisha Juun 2018 'Sannadkan wuxuu furi doonaa dhammaadka.' ayuu yiri. Waxaan dhammeynay 2018, oo aan la furin; Bishii Janaayo ee sanadka 2019, waxaan sidoo kale weydiisaney Wasiirka haatan jira inuu ku weydiin doono. Waxaan weydiinay su’aasha qoraalka mowqifkeenna. Waxaad sheegtay in 2019 uu furi doono qeybta labaad ee sanadka, laakiin 21 Oktoobar 2019'da bayaanka iyo guddiga miisaaniyaddu waxay kugu soo bandhigeen buugga aad sheegtay inay ahayd ilaa 2020. Waxaan fileynaa adeeggan, ugu yaraan 2020. ”
AIRPORT, JOOJINTA HOOSE IYO ÇAMLICA VIADU!
Buugga oo ay soo gudbisay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ee Qorsheynta iyo Miisaaniyadda, oo ay kujirto mashaariicdeeda iyo howlaheeda; Kuxigeenka hay'adda 'CHP' Unver ayaa sheegtay in garoonka Karaman, wadada giraan iyo Çamlıca Viaduct mashaariicda aan lagu darin. “In kasta oo 51 lagu sheegay mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee gobolka, Garoonka Diyaaradaha Karaman laguma xusin buuggan weyn. Tan ayaa kaa sugaysa garoonka diyaaradaha Karaman. Intaa waxaa u dheer, buugga aad ku sheegtey ee ku saabsan mashruucyada wadooyinka ee giraanta; Mashruuca wadada wadada Karaman laguma soo daro buuggan. Oo haddana, 'Turkey ugu weyn, wuxuu noqon doonaa Viaduct ugu dheer.' sidoo kale loo yaqaan "ıamlıca Viaduct" kuma jiraan buuggan; Waa xaalad kacsanaan ah oo bixisa xiriirka ka dhexeeya Mut-Ermenek. ”
Ünver wuxuu hadalkiisa ku sii watay sidan: “Ermenek waa degmadii uu ku dhashay Madaxweynaha Komishanka Mr. Lütfi Elvan. Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelinno Mr. Elvan adeegyadan. Waxaan kaa filaynaa inaad dhammaystirto mashruucyadii uu bilaabay Mr. Elvan intii ay ahayd Wasaaradda Gaadiidka isagoo matalaya Karaman tusaale ahaan daacada. ”
Waxaan weydiinay wasiirka arrimaha gudaha TURHAN
Dhinaca kale, Ünver wuxuu Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan weydiiyay mashruucyada Karaman ay rajeynayaan in la dhameystiro. Uz Waxaan sugeynaa jawaabaha su'aalahan .. Waa kuwan su'aalaha ay Unver weydiisay Wasiirka Turhan:
Maxaysan u fulin karin Madaarka Karaman, wadada wadada iyo Çamlıca Viaduct, oo horey loogu soo daray barnaamijyada maalgashiga, inay ka dhacaan buugga bogga 832 ee ay diyaarisay Wasaaraddaada una gudbisay Guddiga Qorsheynta iyo Miisaaniyadda? Maxaa ku dhici doona mashaariicdan?
Goorma ayaa wadada Bucakkışla ee isku xira Karaman iyo Ermenek la dhameystiri doonaa?
Ma adag tahay in tareenka u dhexeeya Konya iyo Karaman la waafajiyo saacadaha shaqada?
KONYA KARAMAN YHT IYO 40 MINUTES
Marka la dhammaystiro khadka tareenka xawaaraha sare ee Konya Karaman, waxaa suurtagal ah in la gaaro Karaman laga bilaabo Konya illaa daqiiqadaha 40, ilaa Ankara laga bilaabo saacadaha 2 illaa daqiiqadaha 10, iyo Istanbul illaa qiyaastii 5 saacadood.
Qadka tareenka xawaare sare leh ee Konya-Karaman kaas oo yareyn doona waqtiga gaadiidka ee inta udhaxeysa Konya-Karaman 40 wuxuu sii wadaa inuu sii shaqeeyo.
Shaqada ayaa kusii socota saxiixaya khadka tareenka xawaaraha sare ee 1 kiiloomitir, kaas oo yarayn doona masaafada u dhaxaysa Konya iyo Karaman min 18 illaa 40 daqiiqadood illaa daqiiqadaha 102. Marka la dhameystiro khadka tareenka xawaaraha dheer ee Konya Karaman, rakaab ka tagaya Karaman wuxuu awoodi doonaa inuu si sahlan ugu safro Istanbul ama Ankara isagoo maraya Konya. Sidoo kale, kuwa ka socda Istanbul iyo Ankara waxay awood u yeelan doonaan inay Karaman sii aadaan Konya. Xadka gawaarida ee 21, 20 gawaarida xad dhaafka ah iyo lugta 15 lugta lugta waxay ku yaalliin jidka toosan ee u dhexeeya Konya iyo Karaman. Dhammaan saldhigyada ku yaal khadka Konya-Karaman waa la beddelayaa si dadka naafada ah ay u adeegsan karaan saldhigyada aan xaddido.
Daqiiqadaha 40 laga bilaabo Karaman ilaa Konya, 2 saacadood illaa Ankara, 10 daqiiqo illaa Istanbul, iyo qiyaastii saacadaha 5 illaa Istanbul
Shaqooyinka, khadka tareenka xawaaraha sare ee 102 kiiloomitir ee u dhexeeya Konya iyo Karaman waxaa laga sameeyay laba-line, koronto iyo calaamad. Hawlaha, rarida rakaabka iyo soo dejinta aaladaha Kaamka Karaman waxaa sidoo kale lagu waafajiyay imaatinka iyo bixitaanka tareenka xawaaraha sare. Kadib dhammadka khadka, 40 laga bilaabo Karaman ilaa Konya waxaa lagu gaari karaa daqiiqado. Iyada oo la dhammaystiro khadka iyo tareenka xawaaraha sare leh, Ankara waxaa lagu gaari karaa safarka saacadda 5 saacad ahaan bas. Dhismaha Saldhigga 'YHT', oo ay ka mid noqon doonaan dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka bulshada iyo dhaqanka ee loogu talagalay rakaabka ku sugan Goobta Suuqa Wheat ee Konya, ayaa ku sii socota jidka tareenka xawaare-xawaare ku socda.
Dhameystirka khadka tareenka xawaaraha sare ee Konya Karaman, Eregli-Ulukisla-Yenice waxaa lagu xiri doonaa Mersin.
TURKEY XAWAARAHA MAP TARIINKA
Tareenka Konya-Karaman ayaa laga furi doonaa line 2 2015
Karaman Line Tareenka Xawaaraha Sare
Goorma ayaa la furayaa Khadka Xawaaraha Sare ee Karaman Konya
Goormaad tagaysaa Karaman Konya xawaare sare
Karaman-Konya Khadka Tareenka Xawaaraha Sare
Adeegyada tareenada xawaaraha sare ee Karaman-Konya
Jadwalka tareenka Konya-Karaman
Burhan Sergen ayuu yiri:
Furitaanka khadadka cusub waa wax fiican, laakiin sidoo kale aad ayey muhiim u tahay in boos lacag la'aan ah looga helo khadadka shaqeeya ee jira? e ama 1?
Waxaan u maleynayaa in mas'uuliyiinta bilowga TCDD yihiin kuwo aan macquul aheyn oo karti leh.